काठमाडौँ । स्थानीय तहले स्थापना गरेका हेल्थ डेक्सका स्वास्थ्यकर्मीलाइ अमेरिकाबाट सर्जिकल माक्स सहयोग प्राप्त भएको छ । यहाँस्थित बुढीगंगा नगरपालिका–१ कुँडी घर भइ अमेरिकामा नर्सिङ्ग पेशामा कार्यरत भाग्यश्वर सिंहले एक हजार ८०० माक्स सहयोग गर्नु भएको हो । उनले ४० हजार बराबरको एक हजार ८०
अमेरिकाका नागरिकहरु कोरोना भाइरसबाट बच्न मेक्सिकोतर्फ लागेपछि...
एजेन्सी । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश आज घातक भाइरसको शिकार भएको छ । विश्वभर ताण्डव मच्चाइराखेको कोरोनाको विनाशले अमेरिकाको ढाड भाँचेको छ।
अमेरिकामा आइपरेको महा आपत्ति ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन विश्वका सबै मानिसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले आह्वान गरेका पाँच विधिलाई हुबहु पालना गर्दा मात्र पनि धेरै मानिस अकाल मृत्युबाट बाँच्न सक्छन् ।
एजेन्सी । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले सोमबार अफगानिस्तान सरकारलाई दिइँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । काबुल गएको अमेरिकी मिसनले अफगान नेताहरुबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयास बिफल भएसँगै अमेरिकी सहयोग कटौतीको घोषणा गरिएको हो ।
अमेरिकामा ११ वटा अदालत समेत बन्द !
एजेन्सी । अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण २१४ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबारमात्रै ६४ जनाको मृत्यु भएको छ । यति धेरै जनाको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । त्यस्तै संक्रमितको संख्या १३८८० पुगेको छ ।
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई दियो ठुलो राहत
एजेन्सी । अमेरिकामा तीव्र रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ । पछिल्लो मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबारमात्रै ४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौँ । संयुक्तराज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच निकट भविश्यमै हुन लागेको सैन्य अभ्यास स्थगित भएको छ । कोरियामा प्राणघातक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै दुबै मुलुकले सैन्य अभ्यास स्थगित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।